musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Wina Inoshamisa Glamping Zororo Mwaka uno weHorodhe
Pinda kuti uhwine uye unakirwe neimba diki, imba ine ruvara, kabhini, kana yurt chero kupi kwePetite Retreats kwainoenda kuAmerica.
Petite Retreats, iyo inopa mazororo erendi munyika yose, ine Merry Treatmas Sweepstakes, ichipa mukana wekuhwina kugara kwevhiki rese panzvimbo yePetite Retreats yesarudzo yemukundi, pamwe nemimwe mibairo gumi nerimwe panguva yese yekutsvaira. Iine dzimba dzekugara dzinosanganisira dzimba diki, dzimba dzine mavara, makabhini nemayurts, Petite Retreats inopa vafambi zviitiko zvakasiyana-siyana vachinakidzwa nekunze munzvimbo dzepamusoro dzezororo, nenzvimbo dzekutandarira. Makwikwi aya anotarisirwa kutanga neChina, Zvita 11 nevakundi vanosarudzwa zuva rega rega kune rimwe nerimwe remazuva gumi nemaviri ekutsvaira. Mibairo yezuva nezuva inosanganisira kugara kwehusiku huviri mumisha midiki yedzimba iri muOregon, Washington, Arizona, New Hampshire neFlorida Keys, imba yekugara paTropical Palms Resort muKissimmee, Florida, yurt inogara kuYosemite Lakes iri kunze kweNational Park. , Yeti® tumbler package, Patagonia® giya, uye mubairo mukuru kugara kwesvondo rese pane chero nzvimbo yePetite Retreats. Vakwikwidzi vanotevera Petite Retreats paFacebook, Instagram, kana Pinterest vachada kunyoresa zuva nezuva kuti vakwanise kuhwina mubairo wezuva iroro.
Zvita 9, 2021 pa03: 59
Mune yedu glamping rendi inopa musanganiswa wakanakira wepekugara zvakanaka munzvimbo dzakanaka umo vashanyi vanogona kunakidzwa nehukuru. Iyo posvo inzvimbo yekuzorora yakakwana yevafambi vanoongorora Antarctica.